China Fish Gelatin ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Ukubuka konke kweGelken
Impilo Nokudla Okunomsoco
I-Gelatin 40 Mesh
IGelatin 250 Bloom
I-Gelatin Ye-Gummy Candy
I-Gelatin yama-capsule aqinile
I-Collagen yebha yokudla okunempilo
I-Collagen yesiphuzo esiqinile
I-Bovine Collagen Peptides
Ama-peptides ama-Fish Collagen
2g Ishidi le-Gelatin
2.5g Ishidi leGelatin
3g Ishidi le-Gelatin
5g Ishidi le-Gelatin
Ishidi le-Gelatin ku-Powder
AmaSpredishithi Wokukhanya Okuphezulu weGelatin weDessert
Ijubane Elisheshayo Jelly Glue
Ijubane Elimaphakathi I-Jelly Glue
I-Slow Speed ​​Manual Jelly Glue
I-Gelatin Yezimboni Yokunamathela
I-Gelatin Yezimboni yeJelly Glue
I-Gelatin Yezimboni Yomdlalo
I-Gelatin Yezimboni yePaintball
Isilwane sasekhaya uCollagen
Okuphakelayo Ibanga Collagen
I-Bone Glue Bead
I-Capsule Engenalutho Elukhuni
Ukungafihli Okuphezulu kweGelatin S ...
Njengomunye omkhulu kakhulu abahlinzeki be-gelatin nabakhiqizi baseChina, iGelken inganikeza i-gelatin yezinhlanzi ngekhwalithi yokuncintisana nentengo. Sithumele i-gelatin yethu yezinhlanzi eNingizimu Melika, eYurophu, eVietnam, eThailand, eNdiya naseKorea nakwamanye amazwe.
Nge-gelatin yezinhlanzi, sikhathazeka kakhulu ngento eluhlaza. Kumele ihlanzeke futhi ivela ezinhlanzini ezintsha. Futhi iphunga lingenisa kakhulu izinhlanzi ze-gelatin. Sisebenzisa ubuchwepheshe bokuhlunga obuphambili ukwenza izinhlanzi zethu ze-gelatin zinephunga elincane futhi zihlangabezane nezidingo zamakhasimende ethu.
Ngasikhathi sinye, i-gelatin yezinhlanzi uhlobo lwesithako sokudla, esifaneleka kakhulu kubathengi abanendaba nokusimama.
I-gelatin yenhlanzi ikhishwa esikhumbeni sezinhlanzi ze-tilapia nezikali. I-Gelatin iyi-biopolymer ejwayelekile, elungiswa kusuka kwizicubu ezixhumene nezilwane (njengesikhumba nethambo) ngemuva kokulashwa kabusha nokuguqulwa, bese kukhishwa ezingeni lokushisa elifanele.
Ngenxa yezici zayo ezihlukile zokusebenza, inhlanzi i-gelatin ingasetshenziswa kabanzi njenge-ejenti ye-gelling, i-stabilizer, i-emulsifier, i-thickener, i-ejenti ekhihlizayo, i-adhesive kanye ne-ejenti yokucacisa ekudleni, emithini, ezithombeni nakumkhakha wezimonyo.
● Imikhiqizo eyi-100% yemvelo, ephephile nenempilo enokusetshenziswa okuningi.
● Ungumbala ophuzi ngokukhanyayo omhlophe, obala futhi ocwebezelayo, ongangcolisi.
● Kungumkhiqizo we-collagen ophehlwa ngamanzi. Kuyiprotheni ephezulu engenamafutha, ngaphandle kwe-cholesterol. I-glue yemvelo ephezulu ekhangisiwe enezakhi zomzimba kanye nokuqina kokudla.
● Amaprotheni kaGelatin acebile ngama-amino acid ayi-18, ayi-7 angama-amino acid abalulekile. Okuqukethwe ngamanzi nosawoti wezinto ezingaphansi kuka-14%, futhi okuqukethwe kwamaprotheni kungaphezu kwama-86%.
● Iyancibilika emanzini ashisayo, ayincibiliki emanzini abandayo, kodwa ingakhula kancane futhi ithambe ngokumunca amanzi. IGelatin ingamunca amanzi alingana nezikhathi ezinesisindo esingu-5-10.
● I-Gelatin ingasetshenziswa kabanzi embonini yokudla nasekukhiqizeni ama-capsule
Langaphambilini IGelatin yeMarshmallow
Olandelayo: I-Halal Gelatin
IGelken Gelatin igxile ku-R & D, ekukhiqizeni nasekukhangiseni i-gelatin ne-hydrolyzed collagen. Ulayini womkhiqizo uhlanganisa izinhlobo ezingaphezu kwezingu-10 ezifana ne-gelatin edliwayo, i-gelatin yokwelapha, i-gelatin yezimboni, ishidi le-gelatin ne-hydrolyzed collagen.
402, Isakhiwo 4, Aviation FTZ Plaza. Cha 420, Gaoqi North Road, Xiamen 361006 China
Faka i-imeyili yakho bese sizokuthumela amapulani wolwazi wakamuva.